बलियो अष्ट्रेलिया, उत्साहित अफगानिस्तान ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
१८ जेठ, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटमा आज विश्वविजेता अष्ट्रेलियाले अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । ब्रिस्टोलस्थित काउन्टी ग्राउन्डमा हुने अफगानिस्तान र अष्ट्रेलियाबीचको खेल नेपाली समय अनुसार बेलुकी ६ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुनेछ ।
कमजोर अफगानिस्तानमाथि अष्ट्रेलिया सहजै जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ । तर अफगानिस्तान ‘अन्डर डक’ टिम हो ।
जुनसुकै समयमा ठूला टिमलाई पराजित गर्ने सामर्थ्य अफगानिस्तानसँग छ । अफगानिस्तानले आफ्नो पहिलो खेलमै चमत्कारी प्रदर्शन गर्दै आफ्नो उपस्थिति देखाउने लक्ष्यमा छ । एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै आईसीसीको फुल मेम्बर भएको अफगानिस्तानसँग अष्ट्रेलियाले कस्तो प्रदर्शन गर्ला ?
अष्ट्रेलिया अहिले सन्तुलित टिम हो । स्टेभन स्मिथ र डेभिड वार्नर बल टेम्परिङ कान्डको एक वर्षे प्रतिबन्धपछि टिममा फर्किएसँगै अष्ट्रेलिया बलियो भएको छ ।
अष्ट्रेलिया र अफगानिस्तानबीच अहिलेसम्म दुई वटा खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ । सन् २०१२ मा अफगानिस्तानले अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । जुन खेलमा अष्ट्रेलियाले सहजै पराजित गरेको थियो । सन् २०१५ को विश्वकपमा पनि अफगानिस्तान र अष्ट्रेलियाको भेट भएको थियो ।
यो खेलमा अष्ट्रेलियाले ४१७ रन बनाएको थियो । विशाल लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तान १४२ रनमा अलआउट भएपछि अष्ट्रेलियाले २७५ रनको कीर्तिमानी जित निकालेको थियो ।
अफगानिस्तानको नजर स्मिथ, वार्नर र म्याक्श्वेलमा
अष्ट्रेलियाको लागि यो विश्वकप निकै विशेष हुनेछ । विशेषगरी स्मिथ र वार्नर यो विश्वकपमा आरोन फिन्चको अन्डरमा रहेर खेल्नेछन् ।
बल टेम्परिङ कान्डपछि टिममा फर्किएका स्मिथ र वार्नर अहिले निकै लयमा छन् । २०१५ को विश्वकपमा एक शतक र चार अर्धशतकसहित ४०२ रन बनाएका स्मिथ यो पटक पनि त्यस्तै प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा छन् ।
डेभिड वार्नर अष्ट्रेलियाका अनुभवि तथा ओपनिङ ब्याट्सम्यान हुन् । सन् २०१५ को विश्वकप अष्ट्रेलियाले जित्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका वार्नर यो पटक पनि आफ्नो देशलाई विश्वकप दिलाउन चाहन्छन् । वार्नरलाई आउट गर्न निकै मुस्किल पर्न सक्छ ।
ग्लेन म्याक्श्वेल अष्ट्रेलियाका सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्याटिङ अलराउण्डर हुन् । उनी टिमको अवस्था हेरेर ब्याटिङ गर्न आउँछन् । सन् २०१५ को विश्वकप जिताउँन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका म्याक्श्वेल पछिल्लो समयमा निकै लयमा देखिएको छ । ब्याटिङ मात्रै हैन बलिङ पनि उनको उतकै सशक्त रहेको छ । राइट आर्म अफब्रेक बलर म्याक्श्वेलले एकदिवसीय क्रिकेटमा मात्रै ५० विकेट लिएका छन् भने ब्याटिङतर्फ २७०० रन बनाएका छन् ।
अष्ट्रेलियाका लागि राशिद घातक ?
विश्वका नम्बर एक स्पिनर राशिद खान त्यस्ता बलर हुन् जसले आफ्नो छोटो करिअरमै सफल भए । अफगानिस्तानलाई विश्वकपसम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राशिद अष्ट्रेलियाका लागि घातक सावित हुन सक्छ ।
लेग स्पिनर राशिद जुनसुकै अवस्थामा पनि खेल आफ्नो पक्षमा पर्न सक्छन् । अफगानिस्तानका राशिद मात्रै हैन मोहम्मद नावी मुजिब उर रहमान जस्ता स्पिनर अष्ट्रेलियाका लागि टाउको दुखाई हुन सक्छ ।